Taorian’ny Fampitsaharana Ny Fanafihana Tao Gaza, Mampiseho Ny Isan’ireo Aina Nafoy Sy Ny Fahasimbana Nandritra Ny 30 Andro Ny Fanazavana An-tSary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2014 12:53 GMT
Isan'ireo ady ao #Gaza http://t.co/eAbHKuP77V nozarain'ilay mpanoratra gazety @jncatron
Nozaraina tao amin'ny aterineto ireo fanazavana an-tsary mampiseho ny vokatra rehetra nateraky ny fanafihana farany nataon'i Israely tao Gaza.
Nanomboka androany (5 aogositra) ny fampitsaharana ady 72 ora taorian'ny 30 andro nisian'ny daroka baomba Israeliana sy ny fanafihana an-tanety tao amin'ny faritra Palestiniana, izay tsenain'ny balafomangan'i Hamas, ka nahafaty Palestiniana 1 868 sy Israeliana 67 farafahakeliny, araka ny asehoan'ny iray amin'ireo fanehoana an-tsary. Vehivavy avokoa ny 246 tamin'ireo namoy ny ainy ary ankizy ny 426. Vehivavy kosa ny 1 853 tamin'ireo Palestiniana 9563 naratra ary ankizy ny 2 877.
Fampitsaharana ady faninefany teo amin'i Israely sy Gaza ity hatramin'ny nanombohan'ny daroka baomban'i Israely tao Gaza tamin'ny 8 Jolay.
Hatramin'ny nanombohan'i Israely ny fanafihana goavana tao amin'ny morontsirak'i Gaza manana halavana 40 kilaometatra tamin'ny 8 Jolay, nidaroba baomba tao amin'ireo faritra be mponina, tsena, sekoly, toerana an-kalamanjana, hopitaly, toerana fialokalofana sy tobim-pialokalofana ny miaramilan'izy ireo, ka niteraka taham-pahafatesana sivily 75 isan-jato. Tamin'ny 28 Jolay, nanafika ny orinasan'ny herinaratra tokana tao Gaza i Israely, ka nahatonga ireo mponina 1,8 tapitrisa ao Gaza niaina tao anatin'ny aizina (fahatapahan-jiro).
Rehefa tsy mahita toerana handosirana dia mety hihoatra ny 400.000 ny isan'ireo Palestinana nafindra tao Gaza, araka ny filazan'ny Firenena Mikambana.
Euro-Mid Observer for Human Rights (Mpanaramaso ny Zon'Olombelona Euro-Mid), fikambanana iray miorina ao Geneve, izay mikendry hampitsahatra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eo amin'ireo olona monina ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra sy hitondra ireo meloka eny amin'ny fitsarana, nizara ity sary ity:
#InfoGraphics Fanafihan'i Israely tao #Gaza Tarehimarika tao anatin'ny 30 Andro http://t.co/nDGBs9Wlg8 pic.twitter.com/Oglouoguf5
Tamina andiana tabilao sy sary, nilaza ny Euro-mid fa sivily avokoa ny 1487 na 79 isan-jato ireo Palestiniana namoy ny ainy nandritra ny 30 andro; mpikambana avy ao amin'ny vondron'ny mpanohitra ny 299, ary nosokajiana ho “tsy fantatra” kosa ny olona 89. Ka ankizy 426 sy vehivavy 255 avokoa no namoy ny ainy tamin'izany.
Tarehimarika nandritra ny fanafihan'i Israely tao Gaza (Loharano: Euro-Mid)
Mampiseho ny lisitr'ireo Israeliana 67 namoy ny ainy ny sary, ka sivily ny telo ary miaramila avokoa ny 64. Anisan'izany ny Israeliana 57, Amerikana roa, teratany frantsay, Belza roa sy “tsy fanta-piaviana” roa.
9563 kosa ny isan'ireo Palestiniana naratra, ka vehivavy ny 1 927 ary ankizy ny 2 877.
Anisan'ireo namoy ny ainy tao Palestina ny olona sivy ao ao amin'ny UNRWA, mpitsabo 16 ary mpanoratra gazety 12.
Fahavoazana teo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana tao Gaza. Loharano: Euro-Mid
Tabilao hafa mampiseho ny antsipirihan'ny fahavoazana teo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana. Raha atotaly, hopitaly 13 no rava, toeram-pitsaboana 10 no simba, toeram-pitsaboana 34 no nikatona ary fiara mpitondra marary 12 no simba.
Raha ny totaliny dia sekolim-panjakana 98 sy sekoly UNRWA 90 no rava, izay niantraika tamin'ireo mpianatra 152 000. Simba nandritra ny ady ihany koa ny oniversite enina tao Gaza, izay niantraika tamin'ireo mpianatra eo amin'ny 100.000 eo.
Palestiniana atsasaky ny tapitrisa farafahakeliny no nafindra tao Gaza, tsy mahita aleha (Loharanon-tsary: Euro-Mid)
Palestiniana eo amin'ny antsasa-tapitrisa eo no nafindra tao anatiny. Mitotaly 310 000 ireo voatery niala ny tranony noho ny fandrahonan'ny Israeliana, 165 000 kosa nafindra satria rava ny tranon'izy ireo ary 254 000 nosokajiana ho olona nafindra ao anatin'ny faritra ihany (IDP) ao amin'ny tobim-pialokalofan'ny ONU.
Raha atambatra, tokantrano 10604 no lasibatry ny tifitra sy ny daroka baomba Israeliana. Ka 1 724 tamin'izany no rava tanteraka ary 8880 no rava amin'ny ampahany.
May ihany koa ireo toeram-pivavahana. Nilaza ny Euro-mid fa moskea 42 no rava tanteraka ary 90 rava amin'ny ampahany. Rava amin'ny ampahany ihany koa ny fiangonana iray, fanampin'izany ireo toera-pasana miozolomana 10 sy toera-pasana Kristianina iray.
Fanehoana an-tsary mampiseho ireo fitaovam-bahoaka simba ao Gaza. Loharano: Euro-Mid
Miatrika fahatapahan-drano sy fahatapahan-jiro goavana amin'izao fotoana izao i Gaza, izay efa miaritra fahirano nampalemy azy. Milaza ity tabilao ity fa orinasa mpamatsy rano sy mpiandraikitra rano maloto valo no rava, izay niantraika tamin'ireo olona 700 000. Fanampin'izany, fotodrafitrasan'herinaratra 19 no voadaroka baomba nandritra ny ady, izay nahatonga ireo mponin'i Gaza 1,8 tapitrisa niaina anaty aizina.
Rohan Nagel, avy ao Holandy manasokajy ny tenany ho mpikatroka ny zon'Olombelona sy “geek” amin'ny teknolojia nizara ireto sary roa ireto, izay mampiseho ireo fahasimbana:
Faharavana tamin'ny 4 Aogositra – SitRep -Firenena Mikambana. #FreePalestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/gwAtIoltyY
Pejy faha-2 tamin'ny faharavana Sitrep. #FreePalestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/oEgRZ41QCi
Araho ny fitantarana fanampiny ataonay: # Gaza: Mitombo ny isan'ireo sivily mamoy ny ainy amin'ny Fanafihan'i Israely